Google Analytics ine yakanaka ficha, kugona kuteedzera mukati kutsvaga pane yako saiti. Kana iwe uchimhanyisa iyo WordPress blog, pane iri nyore nzira yeku gadzira Google Analytics Saiti Kutsvaga:
Sarudza yako saiti muGoogle Analytics uye tinya Hora.
Enda kune chiono chaunoda kuseta Saiti Kutsvaga.
Dzvanya View Zvirongwa.
Pasi PeSaiti Kutsvaga Zvirongwa, seta Saiti Kutsvaga Kutsvaga kuOO.
Mune iyo Query Parameter munda, pinda izwi kana mazwi anodoma yemukati yemubvunzo paramende, senge "term, search, query". Dzimwe nguva izwi rinongova tsamba, senge "s" kana "q". (WordPress "s") Pinda kusvika pamatanho mashanu, akapatsanurwa nemakoma.
Sarudza kana uchida Google Analytics kubvisa paramende yemubvunzo kubva kuURL yako. Izvi zvinobvisa chete ma parameter awakapa iwe, uye kwete chero mamwe ma parameter muiyo chete URL.
Sarudza kuti unoshandisa here kana kwete zvikwata, zvakadai semamenyu ekudonhedza kutsvagisa saiti
Tags: google analytics saiti yekutsvagagoogle saiti yekutsvaganzvimbo yekutsvagakutsvaga kwemazwi
Ini ndichave ndinopinda musangano weTechPoint neChishanu
Nov 5, 2007 pa2: 31AM
Kutenda nezano, ingoitwa!
Mbudzi 5, 2007 na12: 44 PM
Zvakanaka imwe, Doug! Ndakanga ndisingazive kuti izvi zvaive zviripo.
Aug 11, 2010 na12: 05 PM
Kutenda kune Zano! Ini ndaive ndakaisa izvi mazuva mashoma apfuura uye ndanga ndisina chokwadi nezve yekutsvagirwa kweparm uye ndainetseka kuti nei yanga isiri kubika zvakadaro. Iwe wakagadzirisa nyaya mbiri idzi!
Gumiguru 8, 2011 na7: 57 PM
Kutonhora ndatenda neruzivo, ini ndangozviita izvo! 🙂
Iko zvakare kune plugin SiteMeter, iwe yaunogona kushandisa kuti uone iro kiyi kiyi uye kangani nguva yakatsvaga pane yako blog